Nei Yangu iPhone App Chitoro Isiri Kushanda Kana Blank? Heino Kugadzirisa! - Iphone
iphone 5 inoshanda chete pa speaker speaker
nei imessage yangu ichitumira seyinyorwa
yangu iphone 4 haigoni kubatanidza kune wifi
Iwe uchangonzwa nezve inotonhorera app nyowani uye wagadzirira kuyedza, asi kana iwe ukavhura iyo App Store kuti utore iyo, iyo skrini ingangoita isina chinhu kana yakanamatira kurodha . Iwe une chokwadi kuti haisi nyaya yehardware, nekuti mamwe ese maapplication ako ari kushanda mushe-saka chinofanirwa kunge chiri chimwewo chinhu. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei iyo iPhone App Store isiri kushanda kana isina chinhu , uye maitiro ekugadzirisa dambudziko kuti iyo App Store itange kurodha zvakare pane yako iPhone, iPad, kana iPod.
Iyo Fix: Chii Chaunofanira Kuita Kana Iyo App Store Isiri Kushanda Pane Yako iPhone, iPad, kana iPod
Ndinenge ndiri kushandisa iPhone pakufamba uku, asi maitiro ekugadzirisa App Store paPad uye iPod zvakangofanana. Kana iwe uine iyo iPad kana iPod, inzwa wakasununguka kutsiva chako chishandiso chero iwe paunoona iPhone mune ino chinyorwa.
Vhura Uye Vhurazve Iyo App Store App
Dzimwe nguva glitches diki neApp Store inogona kuzvitadzisa kubatana neinternet, uye kana izvozvo zvikaitika, hazvizotakure zvachose. Chinhu chekutanga kuyedza kuvhara iyo App Store app uye kuivhura zvakare.
Kuvhara iyo App Store, tinya kaviri Bhatani repamba pane yako iPhone kuvhura iyo switch switch. Kana yako iPhone isina Bhatani repamba, swipe kumusoro kubva kuzasi kusvika pakati pekona. Bata munwe wako pakati pechidzitiro kusvikira iyo switch switch yavhura.
Iwe unogona kusvetuka kumashure uye mberi kuti uone ese maapplication ayo akavhurwa pane yako iPhone. Paunowana App Store, shandisa munwe wako ku swipe iyo kubva pamusoro pechiso . Haisi yakaipa pfungwa yekuvhara ese maapplication, kungoitira kana imwe yakatsauka.
Nezve Kuvhara Mapurogiramu Pane iPhone
Ini ndinokurudzira kuvhara ese ako maapplication kamwe zuva rega kana maviri, nekuti zvisinei nezvaungave wakanzwa, izvo ndizvo zvakanaka kune yako iPhone bhatiri hupenyu. Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda, verenga chinyorwa chedu icho chinoratidza nei kuvhara ako maapplication eApple iri zano rakanaka , uye tarisa vhidhiyo yedu zvimwe iPhone bhatiri matipi !
Bvisa Iyo App Store Cache
Havasi vanhu vazhinji vanoziva kuzviita, asi kujekesa App Store cache kunogona kugadzirisa marudzi ese ezvinetso neApp Store pane yako iPhone. Kuchenesa iyo App Store cache, tinya kagumi pane chero tabo icon pazasi peApp Store skrini.
Semuenzaniso, unogona kubaya kagumi pane iyo Nhasi tab kubvisa cache. Iyo App Store haizoregedze zvakare, saka vhura uye uvhure zvakare iyo App Store App mushure.
Tarisa Apple's Sisitimu Yemamiriro Peji
Zvinokwanisika iyo App Store isiri kushanda pane yako iPhone nekuda kwenyaya ine Apple's server. Buda Apple's Sisitimu Yemamiriro peji uye ita shuwa kuti madota akasvibira, kunyanya yekutanga padyo neApp Store.
Kana iri dot kana mamwe akawanda asiri egirini, Apple iri kusangana nedzimwe nyaya uye hapana chakaipa ne iPhone yako. Apple inowanzo gadzirisa nyaya idzi nekukurumidza, saka kubheja kwako kwakanyanya kuve nemoyo murefu uye kutarisa kumashure gare gare.
Tarisa Zuva Rako & Nguva Zvirongwa
Kana yako iPhone Zuva & Nguva Zvirongwa zvisina kumisikidzwa nenzira kwayo, zvinogona kukonzera mhando dzese dzematambudziko pane yako iPhone - kusanganisira iyi! Vhura Zvirongwa uye tapira general . Wobva wadzvanya Zuva & Nguva uye ita shuwa kuti chinja chinotevera kumisikidza ku Setometa.
Tarisa Yako Internet Kubatanidza
Kana iyo App Store isingatakure, chinotevera chinhu chatinofanira kutarisa kubatana kwako kweiyo iPhone kune internet. Kunyangwe mamwe maapplication kana mawebhusaiti achishanda pane chako chishandiso, edza izvi. Iyo App Store inoshandisa tekinoroji yakasiyana pane mamwe maapplication nemawebhusaiti - isu tichataura nezvazvo gare gare.
Kana iwe uchitova paWi-Fi, tichaidzima uye vhura iyo App Store zvakare kuti tione kana ichishanda. Paunodzima Wi-Fi, yako iPhone inochinjira kune yayo isina waya data yekubatanidza, iyo inogona kunzi LTE, 3G, 4G, kana 5G, zvinoenderana neyako isina waya inotakura uye chiratidzo chesimba.
Kana yako iPhone isina kubatana neWi-Fi, tave kuzobatanidza kune imwe netiweki yeWi-Fi uye vhura iyo App Store zvakare.
Maitiro Ekuyedza Yako iPhone Kubatana kune Iyo Internet
Zviri nyore kuyedza yako iPhone kubatana kweinternet. Kutanga, vhura Zvirongwa uye tapira Wi-Fi .
Iwe uchaona switch padivi peWi-Fi pamusoro pekona. Kana switch iri green (kana iri), ipapo yako iPhone iri kubatanidza kune Wi-Fi network kwese pazvinogoneka. Kana switch iri grey (kana kudzima), yako iPhone haimbofi yakabatana neWi-Fi uye inongobatana neinternet uchishandisa maseru data kuburikidza neyako mbozhanhare hurongwa.
Yako iPhone inongobatana neWi-Fi network kana iwe wakabatana navo munguva yakapfuura - haimbofi 'ingobatanidza' kune itsva Wi-Fi network iri yega.
Kana iwe wanga uchinge uchinge uchipfuura yako yemwedzi pamwedzi data mvumo neako asina waya mutakuri, izvi aigona uve dambudziko - tarisa chinyorwa chedu chinonzi Chii Chinoshandisa Dhata Pane iPhone? kudzidza zvakawanda, kana kutarisa UpPhone's ronga kuenzanisa chishandiso kutsvaga zano riri nani renharembozha ine data rakawanda.
Tinya switch iripedyo neWi-Fi kuti ubvise. Tinya switch zvakare kuti udzorere Wi-Fi, wobva wadzvanya pazita renetiweki yaunoda kubatanidza yako iPhone nayo.
Ini Ndinoziva Sei Kana Yangu IPhone Yakatove Yakabatanidzwa KuWi-Fi?
Kana iwe ukaona cheki chebhuruu padyo nezita rewebhu reWi-Fi, yako iPhone yakabatana kune iyo network.
Dzorera Yako iPhone Kubva Uye Kudzoka Pairi
Dzimwe nguva nyaya dzakareruka dzinogona kugadziriswa nekudzima yako iPhone kure uye kumashure. Kuti uite izvi, Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi (inozivikanwa seye Kurara / kumuka bhatani) kudzamara 'slide yemagetsi kudzima' ichioneka pachiratidziri. Kana uine iPhone ine Chiso ID, tinya uye ubatise iyo padivi bhatani uye chero vhoriyamu bhatani kudzamara 'kutsvedza kumagetsi kudzima' kuoneka.
Rova zvakasimba denderedzwa nechisimba Icon mhiri chidzitiro kudzima iPhone wako. Yako iPhone inogona kutora kusvika pamasekondi makumi matatu kudzima zvachose.
Kuti udzorere yako iPhone, dzvanya ubatise bhatani remagetsi kana reparutivi kusvikira logo yeApple yaonekwa pachiratidziri. Vhura App Store zvakare kuti uone kana iri kushanda.
Kugadziridza yako iPhone kunogona kugona kugadzirisa software inodzivirira iyo App Store kushanda nemazvo. Vhura Zvirongwa uye tapira General -> Software Kwidziridza . Tinya Dhawunirodha uye Isa kana Isa Izvozvi kana kugadzirisa kuripo.
huni hunorema zvakadii
Mushure mekuvandudza yako iPhone, vhura iyo App Store uye uone kana dambudziko rakagadziriswa. Enda padanho rinotevera kana iyo App Store ichiri isina chinhu kana isiri kushanda.
Saina Kunze Kweiyo App Chitoro Uye Kudzoka Mukati
Dzimwe nguva, matambudziko kurodha App Store inogona kugadziriswa nekusaina kunze uye kumashure neako Apple ID. Unogona kunge uchishamisika kuti unogona sei kusaina kubva kuApp Store usingakwanise kuwana kupinda iyo App Store, asi zviri nyore - ingo tevera aya matanho akareruka:
Kutanga, vhura Zvirongwa uye tora pazita rako kumusoro kwechiso. Mupumburu pasi uye vawane Buda .
Iye zvino zvawakasainwa, inguva yekusaina zvakare. Tinya iyo Nyorera mu bhatani uye pinda yako Apple ID uye password .
Ita Chokwadi Port 80 uye 443 Dzakavhurwa
Ini handisi kuzowana hunyanzvi pano, asi zvakaringana kutaura kuti yako iPhone inoshandisa akawanda madoko kubatanidza kune internet. Zvinoenderana ne yepamutemo Apple runyorwa rwezviteshi zvavanoshandisa , chiteshi 80 uye 443 ndiwo madoko maviri avanoshandisa kubatana neApp Store neTunes. Kana imwe yemachiteshi ichivharwa, iyo App Store inogona kutakudza.
Ndinoongorora Sei Kana Chiteshi Chakavhurwa?
Kana iwe uri kuverenga ichi chinyorwa pane imwechete iPhone yauri kuita dambudziko nayo, port 80 iri kushanda mushe, nekuti yako iPhone inosangana ne payetteforward.com pakushandisa port 80. Kuti utarise port 443, enda ku Google . Kana ikatakura, chiteshi 443 chiri kushanda mushe. Kana imwe kana imwe yacho isingatakuri, enda kune chikamu chinonzi Reset Network Settings pasi apa.
Kanganwa Wako Wi-Fi Network
Kukanganwa netiweki yako yeWi-Fi inobvumidza yako iPhone kumisikidza kubatana kutsva zvachose ne network. Kana iwe uchibatanidza yako iPhone kune Wi-Fi kekutanga, iyo inochengetedza ruzivo nezve maitiro ekubatanidza kune iyo network. Kukanganwa network kunopa iyo uye yako iPhone kutanga nyowani kutanga, iyo inogona kugadzirisa yekubatanidza nyaya.
Vhura Zvirongwa uye tapira Wi-Fi . Tinya pane bhuruu 'i' ruzivo icon kune kurudyi kwewe-Wi-Fi network, wobva wadzvanya Kanganwa Iyi Netiweki . Tinya Kanganwa kusimbisa chisarudzo chako.
Dzokera kuZvirongwa -> Wi-Fi uye pombi pane yako network pasi Mamwe maNetwork . Reenter yako Wi-Fi password kuti ubatanidzwe kunetiweki.
Kana iyo App Store ichiri kusashanda pane yako iPhone, inguva yekumisazve Network Zvirongwa. Dzorerazve Network Zvirongwa 'inokanganwa' ese maWi-Fi maratidziro awakambobatana nawo, saka usakanganwe kutangazve kune yako yepamhepo Wi-Fi network Zvirongwa -> Wi-Fi mushure meyako iPhone reboots. Iyi reset inogadzirisa zvakare ese maCellular, Bluetooth, uye maVPN masetingi kune zvisizvo zvefekitori. Reset Network Zvirongwa haisi yemashiripiti bullet, asi inogadzirisa yakawanda yeinternet yekubatanidza matambudziko paPhones.
Kuti Reset Network Zvirongwa pane yako iPhone, vhura Zvirongwa uye tapira General -> Seta -> Gadziridza Network Zvirongwa . Pinda yako iPhone passcode, wobva wadzvanya Dzorerazve Network Zvirongwa zvakare kusimbisa kuitazve.
Dzorera kumusoro yako iPhone
Usati waenda padanho rinotevera rekutambudza, tinokurudzira kuchengetedza backup ye iPhone yako. Iyo yekuchengetedza ndeye kopi yeese data pane yako iPhone, kusanganisira vako vaunofambidzana, mapikicha, uye maapp. Pane nzira nhatu dzakasiyana dzekutsigira yako iPhone, uye isu tichafamba iwe nenzira imwe neimwe pazasi.
Kutsigira Up Yako iPhone KuICloud
Tinya Negadziriro yeparutivi .
Ita shuwa kuti switch iripedyo neICloud Backup ndeyegirini, izvo zvinoratidza kuti iri.
Cherekedza: Yako iPhone inoda kuve yakabatana neWi-Fi kudzorera kuICloud.
Kutsigira Up Yako iPhone Ku iTunes
Kana iwe uine PC kana Mac inomhanya macOS 10.14 kana kupfuura, iwe unoshandisa iTunes kana uchitsigira yako iPhone kune yako komputa.
Unganidza yako iPhone kune komputa yako uchishandisa yekuchaja tambo.
Vhura iTunes pane PC yako kana Mac.
Dzvanya pane icon ye iPhone padyo nekona yekumusoro-kuruboshwe kona yeTunes.
Under Backups , Dzvanya denderedzwa padyo ne Iyi Computer nebhokisi riri pedyo ne Encrypt iPhone negadziriro yeparutivi .
Kana ukakurudzirwa, pinda password yako yekombuta kuti unyorese backup.
Kutsigira Up Yako iPhone Kuti Uwane
Kana iwe uine yako Mac inomhanya macOS 10.15 kana nyowani, iwe unoshandisa Finder kana uchitsigira yako iPhone kune yako komputa.
Unganidza yako iPhone kune Mac yako uchishandisa yekuchaja tambo.
Dzvanya pane yako iPhone pasi Nzvimbo kuruboshwe-rwekutsvaga kweKutsvaga.
Dzvanya denderedzwa padyo ne Dzorera rese data pane yako iPhone kune iyi Mac .
Tarisa bhokisi riri padyo ne Encrypt yemuno backup uye nyora yako Mac password.
Iyo DFU kudzorera ndiyo yekupedzisira nhanho iwe yaunotora kuti utonge zvachose kunze kwesoftware dambudziko. Yese kodhi pane yako iPhone inodzimwa uye kuiswazve, tambo netambo. Kana kudzoreredza kwapera, zvichave sekunge iwe uri kutora yako iPhone kunze kwebhokisi kekutanga nguva.
Iva nechokwadi une iPhone negadziriro yeparutivi usati waita nhanho iyi! Pasina negadziriro yeparutivi, iwe ucharasikirwa neruzivo rwese parizvino rwachengetwa pane yako iPhone. Paunenge wagadzirira, tarisa chinyorwa chedu pa sei DFU kudzorera iPhone wako .
Maitiro Ekuwana Rubatsiro Kubva kuApple Kana Iyo App Store Isiri Kushanda
Vhura iyo Mail app kana Safari uye edza kushandisa webhu. Unogona here kuenda kumawebhusaiti kana kurodha pasi email yako? Kana iwe wakateedzera nhanho dzese dziri pamusoro uye internet inoshanda, pane 99,9% mukana dambudziko iri rine chekuita nesoftware. Nzvimbo yakanakira yekutanga yekutora software rutsigiro kubva kuApple .
Kana yako iPhone yanga ichiita zvinoshamisa kana yakakuvara nguva pfupi yadarika uye App Store isingashande, panogona kunge paine chimwe chinhu chiri kuitika. Sarudzo yako yakanakisa ndeye shanyira webhusaiti yeApple kuita musangano kuGenius Bar, kana kushandisa yavo mail-mukugadzirisa basa.
iPhone App Chitoro: Kushanda Zvakare!
Sezvataona, zviripo zvakawanda yezvikonzero nei iyo iPhone App Store inogona kunge isinga shande, asi nekamwe kushivirira, ndine chokwadi kuti iwe unogona kuzvigadzirisa. Vashandi veApple vanonzwa, 'My App Store haina chinhu!' nguva dzese, uye sezvatakakurukura, idambudziko re software 99% yenguva. Iye zvino ndoda kunzwa kubva kwauri: Ndeipi mhinduro yakakonzera kuti App Store itange kurodha zvakare pane yako iPhone? Tiudzei muchikamu chemashoko pazasi.